Budata PhotoScape maka Windows
Free Budata maka Windows (20.05 MB)
PhotoScape bụ mmemme edezi foto bụ nefu maka Windows 7 na kọmpụta dị elu. Ọ bụ nchịkọta akụkọ ihe oyiyi na - enye gị ohere ịme ụdị ụdị foto niile na arụmọrụ ederede na kọmputa gị. Usoro ihe omume ahụ, nke ndị ọrụ kọmputa nke ọkwa niile nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma, na-enye atụmatụ nke ọtụtụ mmemme mmezi onyonyo na ahịa na-enye nefu. Photoscape X maka Windows 10 ka akwadoro.
PhotoScape, nke nwekwara nkwado asụsụ English, na-enye ndị ọrụ English ohere ịghọta ụdị ọrụ niile na ngwa ngwa rụọ ọrụ nhazi ihe oyiyi ha chọrọ.
Olee otú Wụnye PhotoScape?
Nwere ike ịrụ ọtụtụ arụmọrụ dị ka ihe oyiyi na foto cropping, resizing, nkọ ntọala, mmetụta na nzacha, ọkụ nhọrọ, iche, nchapụta na agba itule edezi, adiana, ruru na hà ntọala, na-agbakwunye na-edezi okpokolo agba na-enyemaka nke PhotoScape;
PhotoScape foto na-eto eto
PhotoScape foto ịkụcha ihe
PhotoScape foto na-edezi
PhotoScape foto na-agbanwe
Wepụ PhotoScape ndabere
Ọ na-adọta uche dị ka ihe omume na-aga nke ọma na ndị ọ na-achị. Netiti atụmatụ ndị a ma ama nke PhotoScape;
Onye nlere: Lelee foto na folda gị, mee ihe ngosi mmịfe.
Editor: Gbanwee, nchapụta na nhazigharị agba, nguzo ọcha, mgbazi ọkụ azụ, okpokolo agba, balloons, ọnọdụ Mozis, tinye ederede, see eserese, akuku, ihe nzacha, dozie anya uhie, na-enwu ọkụ, agba agba ahịhịa, mmepụta akara mmepụta okike, mmetụta
Ogbe nchịkọta akụkọ: Dezie otutu foto na ogbe.
Peeji: Mepụta foto nke ikpeazụ site na ijikọta ọtụtụ foto na igbe peeji.
Jikota: Mepụta foto nke ikpeazụ site na ịgbakwunye ọtụtụ foto kwụ ọtọ ma ọ bụ ihu.
GIF na-agba agba: Mepụta foto ikpeazụ site na iji ọtụtụ foto.
Bipute: Bipụta eserese eserese, kaadị azụmaahịa, foto paspọtụ.
Nkewa: Kewaa foto nime otutu uzo.
Ihuenyo edekọ: Weghara ma chekwaa nseta ihuenyo gị.
Picker Agba: Bugharia foto, chọọ ma họrọ agba.
Kpọgharia aha: Gbanwee aha faịlụ faịlụ foto na ọnọdụ ogbe.
Raw Ntụgharị: tọghata Raw ka usoro JPG.
Nata Akwụkwọ Mbipụta: Bipụta akara, eserese, egwu na akwụkwọ kalenda.
Chọọ ihu: Chọta ihu yiri ya na ịntanetị.
Etu esi eji PhotoScape
Enwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche ị nwere ike iji na ihuenyo izipu nke na-egosi mgbe ị na-agba PhotoScape na oge izizi mgbe ibudatara ya na kọmputa gị. RAW Ihe Ntughari, Ntughari ihuenyo, Onye nchịkọta agba, AniGif, jikọrọ ọnụ, Editor Batch, Editor na Viewer bụ ole na ole nime nhọrọ ndị a. Mgbe ịpịrị njikọ maka nhọrọ ịchọrọ iji, ị nwere ike ịmalite ngwa ngwa iji bọtịnụ ọ bụla na-enye gị ohere ịme ntọala niile ịchọrọ.
Ihe ịchọrọ ime na PhotoScape, nke nwere ọtụtụ atụmatụ na mmemme mmezi ọkachamara na-enye ha nefu, na-ejedebe site nechiche gị. Ọ bụrụ nịchọrọ, ịnwere ike iji foto gị mee kolaji, ịnwere ike itinye ihe nzacha na foto gị, ma ọ bụ ịnwere ike ịkwadebe gifs animated.
Eziokwu ahụ bụ na ụdị foto niile na onyonyo edezi ihe oyiyi ị nwere ike ịchọrọ dị na otu njirimara ọrụ dị mfe na-eme ka PhotoScape dịkwuo mma maka ndị ọrụ. Ọ bụ ya mere ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme mmezi foto na - adịghị mfe ma dịkwa mfe iji, ị ga - anwale PhotoScape.
Ọ na-eme ka ọ dị mfe iji ya na ntọala akpaka.
Comprehensive na kpam kpam free.
Ọ na-ewe omume iji ngwá ọrụ rụọ ọrụ nke ọma.
Nha faịlụ: 20.05 MB
Milton dị maka nbudata dị ka ngwa ebe anaghị eji pikselụ eme ihe ma enwere ike ịdọrọ nkọwa niile. ...
PicPick bụ ngwa imewe dị mfe ma dịkwa nfe. Ihe omume a bu ezigbo onyonyo na ndi editọ eserese maka...
Artweaver bụ ngwa onyonyo efu ma dịkwa mfe iji. Can nwere ike ịse ihe site na iji ngwa a, nke a...
Edezi foto adịghị mfe. Iji dezie foto ọkachamara, ị kwesịrị ịma ọtụtụ nkọwa. Mana ekele maka mmemme...
Fotowall bụ ezigbo onye nchịkọta akụkọ ihe oyiyi na-apụta na koodu mmalite ya na iji ya eme ihe dị...
Cartoonizer onyonyo bụ sọftụ dị mfe iji nke nwere ike nye nsonaazụ eserese ka faịlụ onyonyo gị...